ကလေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများဖော်ပြချက် (၂၀၂၀) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
မှတ်ချက်များ - ပြန်လည်သုံးသပ်ချက် (စာတမ်းအပြည့်အစုံ) ဒီမှာ) ။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုအနှစ်ချုပ်ထားသောအဓိကစားပွဲနှစ်ခု -
မတ်လ - Aprilပြီ၊ ၂၀၂၀၊ အတွဲ ၃၄၊ စာစောင် ၂၊ စာမျက်နှာ ၁၉၁-၁၉၉
GAIL Hornor, DNP, CPNP, SANE-P ကို,ရေးသားသူ DNP, CPNP, SANE-P Gail Hornor နှင့်ပတ်သက်သောစာပေးစာယူသတင်းအချက်အလက်များ ရေးသားသူ DNP, CPNP, SANE-P Gail Hornor သို့အီးမေးလ်ပို့ပါ
ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များသည်ဒီဂျစ်တယ်ကမ္ဘာတွင်ကြီးပြင်းလာကြသည်။ ဆယ်လူလာဖုန်းများနှင့်အင်တာနက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ လက်လှမ်းမီနိုင်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကိုလျင်မြန်စွာတိုးချဲ့ခြင်းသည်လူသားတည်ရှိမှုကိုပြောင်းလဲစေသည်။ မြီးကောင်ပေါက်နည်းပညာကိုအသုံးပြုခြင်းတွင်စုပ်ယူသည်။ သို့သော်ဤအပြုအမူသည်ငယ်ရွယ်သောကလေးများအတွက်လည်းထူးခြားသောလက္ခဏာဖြစ်လာသည်။Livingstone & Smith က, 2014) ။ ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်တွင်အမေရိကန်၏ပျမ်းမျှကလေးငယ်သည် ၄ ​​နှစ်အရွယ်တွင်ရုပ်မြင်သံကြားကိုပုံမှန်ကြည့်ရှုခဲ့သော်လည်းယနေ့အချိန်တွင်ကလေးများသည် ၄ ​​လအရွယ်တွင်ဒီဂျစ်တယ်မီဒီယာနှင့်စတင်ဆက်သွယ်ကြသည် (Reid Chassiakos et al ။ , 2016) ။ နည်းပညာသည်ဆက်သွယ်ရေး၊ အပန်းဖြေမှုနှင့်ပညာရေးကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သော်လည်း၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။ အန္တရာယ်တစ်ခုမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ထိတွေ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အင်တာနက်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေလောကကိုပြောင်းလဲစေပြီးကလေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခွင့်ကိုတိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကိုအငြင်းပွားရန်ခက်ခဲသည်။ အင်တာနက်သည်ကလေး၏အခန်း၏လုံခြုံမှုမှပင်မိဘ၏အသိပညာအနည်းငယ်မျှသာရှိသည့်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုကြည့်ရှုနိုင်သည့်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုချက်ချင်းလက်လှမ်းမီစေသည်။Wright & Donnerstein, 2014) ။ ယခုဆက်လက်လေ့လာမည့်ဆောင်းပါးသည်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်၊ ကူးစက်ရောဂါ၊ ကြိုတင်ခန့်မှန်းသူများ၊ အကျိုးဆက်များနှင့်အလေ့အကျင့်အတွက်ဂယက်ရိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကလေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုလေ့လာပါမည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသူအားလိင်ဆက်ဆံရန်လှုံ့ဆော်ရန်ရည်ရွယ်ထားသောပညာရှင်ဆန်ဆန်ထုတ်လုပ်သောသို့မဟုတ်စားသုံးသူထုတ်လုပ်သောရုပ်ပုံများသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုများအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည် (ပတေရုသ & Valkenburg, 2016) ။ ရိုးရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်ရုပ်မြင်သံကြား၊ ရုပ်ရှင်နှင့်မဂ္ဂဇင်းများကဲ့သို့သောရိုးရာမီဒီယာနေရာများပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်းဆိုသည်မှာလိင်အင်္ဂါများနှင့်ထိတွေ့သည့်ရုပ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုအွန်လိုင်းကြည့်ရှုခြင်းသို့မဟုတ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ နှင့် / သို့မဟုတ်လူများသည်ကြည့်ရှုသူ၌လိင်မှုဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုကိုလှုံ့ဆော်ရန် ရည်ရွယ်၍ လိင်ဆက်ဆံနေသော (သို့မဟုတ်)ပတေရုသ & Valkenburg, 2016) ။ လိင်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအမျိုးမျိုးကိုအပြာစာပေရုပ်ပုံများနှစ်မျိုးစလုံးတွင်ဖော်ပြထားသည်။ အားလုံးသည်လိင်အင်္ဂါကိုအဓိကထားသည့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊
အင်တာနက်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများသုံးစွဲခြင်းကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်ရိုးရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်လူတစ် ဦး ချင်း၏အခြေခံကျသောဆက်နွယ်မှုကိုအင်တာနက်ကပြောင်းလဲစေပြီး၊သစ်သား, 2011) ။ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုအားဖြင့်ဘယ်နေရာမှမဆိုရနိုင်သည်။ တစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက်၊ တစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရီ၊ တစ်ရက်လျှင်ရရှိနိုင်သည်။ အင်တာနက်သည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကို Triple-A အင်ဂျင်မှတစ်ဆင့်ဖြန့်ဝေရန်ခွင့်ပြုသည်။Cooper က, 1998) ။ မိရိုးဖလာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်စတိုးဆိုင်တစ်ခုသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေတစ် ဦး ထံမှမဂ္ဂဇင်းသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်ရယူရန်သို့မဟုတ်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များကိုကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်မိဘများရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည့်အန္တရာယ်ကိုပိုများစေသည်။ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်မိဘများအတွက်စောင့်ကြည့်ရန် ပို၍ ခက်ခဲသည်၊Collins et al ။ , 2017) ။ ကလေးသို့မဟုတ်ဆယ်ကျော်သက်သည်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုပုဂ္ဂလိကနှင့်အမည်မသိဟုရှုမြင်လေ့ရှိပြီး၎င်းသည်ရိုးရာမီဒီယာမှတစ်ဆင့်မရှာဖွေလိုသည့်အကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေရန်အားပေးခြင်းဖြစ်သည်။
အစဉ်အလာအပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အချို့သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုထိန်းချုပ်ထားပြီး၊Wright & Donnerstein, 2014) ။ လေ့လာမှုများအရအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကိုအစဉ်အလာအပြာစာပေရုပ်ပုံများထက်ပိုမိုဖော်ပြလေ့ရှိသည်။Collins et al ။ , 2017; Strasburger, ဂျော်ဒန်, & Donnerstein, 2012) ။ လေ့လာမှုများအရအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများသည်လိင်မှုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သောလိင်ကြမ်းတမ်းသောအပြုအမူများကိုအားပေးသည့်လိင်ဇာတ်ညွှန်းများကိုတင်ပြသည်။Bridges, Wosnitzer, Scharrer, Sun & Liberman, 2010) ။ အမျိုးသားများသည်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်သားကောင်များဖြစ်သည်။ လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်အတူရန်လိုသည့်အပြုအမူအမျိုးမျိုးကိုမကြာခဏပုံဖော်လေ့ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် choking, spanking, kicking, လက်နက်အသုံးပြုခြင်း၊ ရိုက်နှက်ခြင်း၊Wright & Donnerstein, 2014) ။ နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသောခေါ်ဆိုမှုကိုမကြာခဏတွေ့ရသည်။ အဓမ္မပြုကျင့်မှုကိုပုံဖော်ခြင်းကိုအင်တာနက်ရှာဖွေရေးမှတစ်ဆင့်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သောအရာများသို့မဟုတ်မုဒိမ်းမှုအထောက်အကူပြုသည့် script များပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်ရှာဖွေနိုင်သည်။Gossett & Byrne, 2002) ။ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်ကလေးသူငယ်များနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ရိုးရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်မတူအောင်တွန်းအားပေးခြင်း၊Malamuth, Linz, & Yao, 2005) ။ ၎င်းသည်ထိတွေ့ခြင်းနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်ခြင်း၊ ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သင်ယူမှုတိုးမြှင့်ခြင်းအတွက်အလားအလာကောင်းများကိုပေးစွမ်းနိုင်သည်။ အွန်လိုင်းစကားပြောခန်းများနှင့်ဘလော့ဂ်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများကိုအထောက်အပံ့နှင့်အားဖြည့်ပေးသည်။
ကလေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြစ်စေ၊ မရည်ရွယ်ဘဲထိတွေ့ခြင်းဥပမာများတွင်မလိုလားသောမက်ဆေ့ခ်ျများဖွင့်ခြင်းသို့မဟုတ် spam အီးမေးလ်များကိုလက်ခံခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။Chen, Leung, Chen, & Yang, 2013), ဝက်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာများကိုမှားယွင်းစွာရိုက်ခြင်း၊ လိင်နှင့်လိင်ဆိုင်ရာအဓိပ္ပာယ်ရှိသည့်အသုံးအနှုန်းများကိုရှာဖွေခြင်း (ရေလွှမ်းမိုးခြင်း, 2007), သို့မဟုတ်မတော်တဆ Pop-up ပုံများနှင့်ကြော်ငြာများကိုကြည့်ခြင်း (evčíková, Šerek, Barbovschi, & Daneback, 201) ။ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုဖော်ထုတ်ခြင်းသည်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနှင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်၊ မကြာခဏအကြောင်းအရာကိုအွန်လိုင်းမှတက်ကြွစွာရှာဖွေခြင်းပါဝင်သည်။ မရည်ရွယ်ဘဲအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်းသည်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းအားမည်သည့်အတိုင်းအတာအထိအထောက်အကူပြုသည်ကိုမရှင်းလင်းပေ။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမရည်ရွယ်ဘဲရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖော်ထုတ်ထားသောကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏အတိအကျကိုဆုံးဖြတ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ လေ့လာမှုနှုန်းပျံ့နှံ့မှုနှုန်းကွဲပြားသည်။ မရည်ရွယ်သည့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများရိုက်ကူးမှုပျံ့နှံ့မှုနှုန်းမှာ ၁၉% မှ ()Mitchell & Wells၊ ၂၀၀၇) (% 32 မှHardy, Steelman, Coyne, & Ridge, 2013) ။ ၁၀ နှစ်မှ ၁၇ နှစ်ကြားအမေရိကန်လူငယ်များအားတစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်ကိုယ်စားပြုသောလေ့လာမှုတစ်ခုအရလေ့လာမှုပြုလုပ်သောလူ ဦး ရေ၏ ၃၄ ရာခိုင်နှုန်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိကြည့်ရှုကြသည် (Wolak, မစ်ချယ်, & Finkelhor, 2007) ။ သို့သော်အသက် ၁၀ နှစ်မှ ၁၁ နှစ်အကြားရှိကလေးငယ်များသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်မဖြစ်နိုင်ချေ။ ယောက်ျားလေးများ၏ ၂% မှ ၅% နှင့်မိန်းကလေး ၁ ရာခိုင်နှုန်းသည်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းကိုအစီရင်ခံနေသည်။Wolak et al ။ , 2007). Ybarra၊ Mitchell၊ Hamburger၊ Diener-West နှင့် Leaf (၂၀၁၁)၁၂ နှစ်မှ ၁၇ နှစ်ကြားလူငယ် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ဆယ်ကျော်သက် ၁၀၀၀ နီးပါးကိုအမေရိကန်လေ့လာမှုတစ်ခုအရအမျိုးသား ၆၆ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အမျိုးသမီး ၃၉ ရာခိုင်နှုန်းသည်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေများကိုကြည့်ရှုခဲ့သည်က Short, အနက်ရောင်, စမစ်, Wetterneck, & ဝဲလ်, 2012) ။ ၁၀ နှစ်မပြည့်သေးသောကလေးများအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုလေ့လာခြင်းသည်အတော်အတန်မလေ့လာသေးပါ။Rothman, Paruk, Espensen, Temple, & Adams, 2017).
သို့သော်ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များကမရည်ရွယ်ဘဲရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနှင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းသည်အသက်အရွယ်အလိုက်တိုးပွားလာပြီးကျားမအလိုက်ကွဲပြားသည် (Mitchell & Wells၊ ၂၀၀၇; Tsaliki၊ ၂၀၁၁) ။ ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာနောက်ထပ်လေ့လာမှုတစ်ခုအရအသက် ၁၀ နှစ်မှ ၁၇ နှစ်အကြားရှိ ၄၂ ရာခိုင်နှုန်းသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။Wright & Donnerstein, 2014) ။ လေ့လာမှုများအရယောက်ျားလေးများသည်မိန်းကလေးများထက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည် (Bleakley, Hennessy, & Fishbein, 2011; Luder et al ။ , 2011) ။ ယူနိုက်တက်စတိတ်မှနောက်ထပ်လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ၁၅ နှစ်မှ ၁၇ နှစ်ကြားယောက်ျားလေး ၅၄ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်မိန်းကလေး ၁၇ ရာခိုင်နှုန်းသည်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့ရာတွင်ဥရောပသမဂ္ဂ၌ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုလေ့လာမှုအရကျား၊ မအခြေပြုအပြာစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှုသည်နိုင်ငံ၏လူမှုတိုးတက်မှုနှင့်ကွဲပြားကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။evčíková et al ။ , 201) ။ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုတွင်ကျား၊ မကွဲပြားမှုများသည်လူမှုရေးအရ ပိုမို၍ လူမှုရေးအရရှေးရိုးစွဲနိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လူမှုရေးအရလစ်ဘရယ်နိုင်ငံများတွင်ကွဲပြားမှုနည်းသည်။
ဆယ်ကျော်သက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအသုံးပြုမှုလမ်းကြောင်းကိုနားလည်ရန်အရေးကြီးသည်။ Doornwaard, ဗန်ဒင် Eijnden, Baams, Vanwesenbeeck, & ter Bogt (2016)ယောက်ျားလေးများအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးပုံသုံးပုံကိုဖော်ပြပါ။ အသုံးမပြုခြင်း (သို့) ခဏခဏဖြစ်ခြင်း၊ ပြင်းထန်စွာအသုံးပြုခြင်း၊ ရံဖန်ရံခါအသုံးပြုခြင်းနှင့်အသုံးပြုမှုလျှော့ချခြင်း။ မိန်းကလေးများအတွက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုမှုသည်လမ်းကြောင်းသုံးခုနောက်သို့လိုက်သည်။ လေ့လာမှုများအကြားပျံ့နှံ့မှုနှုန်းကွဲပြားသော်လည်းအမျိုးသားနှင့်နိုင်ငံတကာလေ့လာမှုများကအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုယောက်ျားလေးများကြားတွင်တွေ့ရလေ့ရှိပြီးမိန်းကလေးများတွင်လည်းအဆန်းမဟုတ်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။Collins et al ။ , 2017).
အချို့သောအချက်များသည်ကလေးသူငယ်များနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်း၏အရေးကြီးသောခန့်မှန်းသူများဖြစ်သည် (ထောင့်ကွက် 1) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လူ ဦး ရေဆိုင်ရာအချက်များတွင်ယောက်ျားနှင့်ကျား၊ မလူမှုစီးပွားရေးအခြေအနေများပါဝင်သည်။Hardy et al ။ , 2013) ။ လိင်နှင့်လိင်တူသောဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားများသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုတိုက်ရိုက်ယောက်ျားများထက်များသောအားဖြင့်အသုံးပြုလေ့ရှိသည် (Luder et al ။ , 2011) ။ မိသားစုအကြောင်းများကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ခြင်းဖြင့်လည်းအန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။ ကြင်ဖော်မဲ့မိဘအိမ်တွင်နေထိုင်ခြင်း၊ စောင့်ရှောက်သူများစောင့်ကြည့်ခံရသည့်အဆင့်နိမ့်ကျခြင်းနှင့်စောင့်ရှောက်သူများနှင့်အားနည်းနေသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင်ကြိုးများကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းကိုပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် (Ybarra & Mitchell က, 2005).
ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဝိသေသလက္ခဏာများလည်းကြိုတင်ခန့်မှန်းဖြစ်ကြသည်။ အာရုံခံစားမှုရှာဖွေသူများ၊ စည်းကမ်းချိုးဖောက်သောအမူအကျင့်များနှင့်ချုပ်တည်းမှုနည်းပါးသောကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်ပိုများနိုင်သည် (Wright & Donnerstein, 2014) ။ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာရှာဖွေနေသောမြီးကောင်ပေါက်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုမြင့်မားစွာပြုလုပ်လေ့ရှိသည် (Beyens, Vandenbosch, & Eggermont, 2015; ပတေရုသ & Valkenburg, 2016; evčíková et al ။ , 201) ။ သူတို့၏ဘဝကိုမကျေနပ်ကြောင်းဖော်ပြသောဆယ်ကျော်သက်များသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန် ပို၍ ဖြစ်နိုင်သည် (ပတေရုသ & Valkenburg, 2016) ။ Social deviance သည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းကိုလည်းဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များနှင့်အကျိုးသက်ရောက်ပြီးအခြားစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အပြာစာပေရုပ်ပုံကြည့်ရှုခြင်းတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည့်စည်းမျဉ်းများကိုငြင်းပယ်လေ့ရှိသည်။Hasking, Scheier, & Abdallah, 2011).
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုစိတ်ဒဏ်ရာနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းကိုလည်းကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုခံစားခဲ့ရသောသို့မဟုတ်မိဘကွာရှင်းခြင်းကဲ့သို့သောမကြာသေးမီကဆိုးရွားသည့်ဘဝအတွေ့အကြုံရှိသောလူငယ်များသည်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်ပိုများသည်။ ရိုးရာနှင့် / သို့မဟုတ်ဆိုက်ဘာအနိုင်ကျင့်ခြင်းများကိုကြုံတွေ့ရသောဆယ်ကျော်သက်များသည်လည်းအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုရန်ပိုများသည်။Shek & Ma, 2014) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းအတွက်အခွင့်အလမ်းကလည်းအမှန်တကယ်ကြည့်ရှုခြင်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည်။ သူတို့၏ဖုန်းများ (သို့) အိပ်ခန်းထဲရှိကွန်ပျူတာများမှအင်တာနက်ကိုသုံးသောလူငယ်များသည်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုရန်ပိုများသည်။ ထို့အပြင်၊ ဘာသာရေးအရမပါ ၀ င်သောလူငယ်များနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းအားကြည့်ရှု။ ပြစ်တင်ရှုတ်ချရန်အလားအလာနည်းပါးသောလူငယ်များအကြား၊ အကျဉ်းချုပ်မှာ Peter & Valkenburg (၂၀၁၆)) ပုံမှန်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုသူကိုယောက်ျား၊ အပျိုဖော်ဝင်ခြင်းအဆင့်နှင့်အားနည်းသောသို့မဟုတ်ပြtroublနာရှိသောမိသားစုဆက်ဆံရေးရှိသည့်အာရုံခံစားမှုရှာဖွေသူအဖြစ်ဖော်ပြပါ။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကလေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအသုံးပြုခြင်းမှအကာအကွယ်ပေးသောအချက်များရှိသည်။ ဘာသာရေးနှင့် ပတ်သတ်၍ ဘာသာရေးအရပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်ပါ ၀ င်မှုသည်ကလေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းကိုကာကွယ်ရန်အကာအကွယ်ဖြစ်စေသည်။Hardy et al ။ , 2013) ။ ဘာသာတရားသည်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ ဘာသာတရားသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကိုလူမှုရေးဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုများအပေါ်ပိုမိုရှေးရိုးစွဲသဘောထားကိုအထောက်အကူပြုသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကလေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအသုံးပြုခြင်းမှအကာအကွယ်ပေးသည့်အခြားအချက်များမှာအဆင့်မြင့်မိဘပညာရေး၊ လူမှုစီးပွားဘဝမြင့်မားမှု၊ ကျောင်းတွင်ပိုမိုတွယ်တာမှုရှိခြင်း၊ဘရောင်း & L'Engle, 2009; Mesch၊ ၂၀၀၉).
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစင်တာကိုကလေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောစိုးရိမ်ပူပန်မှုများအခြေခံအကြောင်းအရာ ၃ ခု - ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအလွယ်တကူလက်လှမ်းမီခြင်း၊ အပြာစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ကလေးသို့မဟုတ်ဆယ်ကျော်သက်တစ် ဦး ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုလိင်နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များမှခွဲထုတ်ရန်စွမ်းရည် (Wright & Štulhofer, 2019) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဆိုးကျိုးများကိုကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်မှုများနှင့်အပြုအမူများအပေါ်စဉ်းစားသောအခါဖွံ့ဖြိုးမှုအကြောင်းအချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ၇ နှစ်မှ ၈ နှစ်အောက်ကလေးများသည်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ဖြစ်ပျက်နေသောအရာများနှင့်တကယ့်ဘဝ၌ဖြစ်ပျက်နေသောအရာများကိုခွဲခြားရန်အခက်အခဲရှိကြသည် (Collins et al ။ , 2017) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေမှလိင်မှုဆိုင်ရာအကြောင်းကလေးများမည်ကဲ့သို့နှင့်မည်သို့လေ့လာသည်ကိုပိုမိုနားလည်ရန်အတွက်တစ် ဦး ချင်းစီ၏သိမြင်မှုအပြောင်းအလဲစွမ်းရည်ကိုစဉ်းစားရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ လူမှုစီးပွားရေးနှင့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပြည်နယ်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်း၏အရေးပါမှုနှင့်လုပ်ဆောင်မှုကိုထိခိုက်နိုင်သည်။ဘရောင်း, Halpern, & L'Engle, 2005) ။ ကလေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်တို့၏ ဦး နှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုသည်မပြည့်စုံသေးပါကအန္တရာယ်ရှိသောအပြုအမူများ၌ပါ ၀ င်နိုင်ပြီး၎င်းသည်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုမည်သည့်အတိုင်းအတာအထိရှာဖွေသည်၊Collins et al ။ , 2017) ။ ကလေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်များသည်မရင့်ကျက်သေးပါ။ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အပြာစာပေရုပ်ပုံများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းများနှင့်လက်တွေ့ဘ ၀ လိင်နှင့်ဆက်ဆံမှုများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသင့်သည့်နည်းလမ်းများစွာကိုနားလည်နိုင်ရန်အတွက်၎င်းတို့၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုသည် (ရှိသည်)Baams et al ။ , 2015). Wright (2011)လိင်မှုဆိုင်ရာဇာတ်ညွှန်းသီအိုရီ - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏လူမှုဆက်ဆံရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရှင်းပြရန်သီအိုရီတစ်ခုကိုအဆိုပြုခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်အသုံးပြုသူများအား၎င်းတို့ယခင်ကမသိရှိခဲ့သည့် (ရယူခြင်း)၊ သူတို့သတိထားမိခဲ့သည့်လိင်မှုကိစ္စများကိုအားဖြည့်ပေးသည်။ လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုစံပြု၊ သင့်လျော်ခြင်းနှင့်ဆုချခြင်းများအဖြစ်ဖော်ပြခြင်း၊ script များ (application) ။
မြင် ထောင့်ကွက်2ကလေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအကျိုးဆက်များအတွက်။ ၁၂ နှစ်အောက်ကလေးငယ်များတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအဓိကစိုးရိမ်မှုမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ (PSB) ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်သည်။ PSB သည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသို့မဟုတ်ပါးစပ်ဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကဲ့သို့သောရှုပ်ထွေးသောလိင်ဆိုင်ရာလုပ်ရပ်များတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းကဲ့သို့သောကလေး၏အသက်အရွယ်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်များအတွက်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း ကျော်လွန်၍ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဗဟုသုတများပါ ၀ င်သည်။Mesman, Harper ကို, Edge, Brandt, & Pemberton, 2019). Chaffin et al ။ (၂၀၀၈)) ၁၂ နှစ်အောက်ကလေးများ၏ဤ PSB သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းအပါအဝင်အကြောင်းရင်းများစွာ၏ရလဒ်ဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ ငယ်ရွယ်သောကလေးများအတွက် PSB သည်စိတ်ဒဏ်ရာနှင့်အကြမ်းဖက်မှု၊ ကြီးကြပ်မှုမလုံလောက်ခြင်း၊အမျိုးသားကလေးစိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုကွန်ယက်၊ ၂၀၀၉). Dillard၊ Maguire-Jack၊ Showalter၊ Wolf နှင့် Letson (2019)ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းတွင်ပါ ၀ င်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားသောအသက် ၁၂ နှစ်အောက်ကလေးငယ်များသည်၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်မတူသောရွယ်တူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် PSB တွင်ပါဝင်ခြင်းသည်သိသိသာသာပိုမိုများပြားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ လူမှုလေ့လာမှုသီအိုရီသည်ဤဖြစ်ရပ်ကိုနားလည်ရန်အတွက်အခြေခံဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကထိတွေ့ခြင်းသည်ကလေးသူငယ်များအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်မိတ်ဆက်ပေးရုံသာမကအပြုအမူများကိုလည်းအားဖြည့်ပေးသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၌ပါ ၀ င်သည့်အခါဆုလာဘ်များ (အပျော်အပါး) ကိုပုံဖော်ခြင်းကြောင့်ကြည့်ရှုခြင်းအားဖြည့်သည်။Dillard et al ။ , 2019) ။ PSB နှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားသောအပြုအမူများအကြားဆက်နွယ်မှုသည်မရှင်းလင်းပေ။ ကလေးကသင့်လျော်သောစိတ်ကျန်းမာရေးကုသမှုခံယူလျှင်အန္တရာယ်နိမ့်ကျသည်ဟုယူဆရသည် (Chaffin et al ။ , 2008) ။ သို့သော် PSB တွင်ပါ ၀ င်သည့်ကလေးများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားသောအပြုအမူများပါဝင်သောမြီးကောင်ပေါက်များသည်ကလေးငယ်များအားမတော်မတရားပြုမှုဆက်ဆံခြင်းသမိုင်းအပါအ ၀ င်ဘုံအန္တရာယ်အချက်များကိုဝေမျှကြသည် (Yoder, Dilliard, & Leibowitz, 2018) နှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစောစီးစွာထိတွေ့ခြင်း (Dillard et al ။ , 2019).
အမှတ်အသားမပြုဘဲ box ကို
ကလေးသူငယ်များနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၌လိင်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားမှုနှင့်အတူအင်တာနက်အပြာစာပေရုပ်ပုံများအလွယ်တကူရရှိနိုင်မှုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းသည်အလွန်အကျွံဖြစ်လာပြီးစွဲလမ်းစေနိုင်သည် (သို့)Tsitsika et al ။ , 2009; Ybarra & Mitchell က, 2005) ။ အခြားဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဆိုးကျိုးများအပြင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ခြင်း၊ လိင်ဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များ၊ အမျိုးသမီးများအားခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်လိင် - လိင်ကွဲပြားမှုရှိသောအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးပုံစံအမျိုးမျိုးကိုအားပေးအားမြှောက်ပြုသည်။ပတေရုသ & Valkenburg, 2016) ။ လိင်မှုဆိုင်ရာပုံဖော်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်နွယ်သောအရာများမှာပုဂ္ဂိုလ်ရေးမပါသော၊ပတေရုသ & Valkenburg, 2016; Wright & Donnerstein, 2014).
Matković, Cohen, & Štulhofer (2018)) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက်လိင်ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုနှင့်ဆက်စပ်ပုံကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ခရိုအေးရှားဆယ်ကျော်သက် ၁၀၀၀ ကျော်သည်လှိုင်း ၃ လုံးလေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့ပြီး ၄ င်းတို့အနေဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကို ၁ နှစ်တာကာလအတွင်း ၃ ကြိမ်တိုင်တိုင်စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုအခြေခံမှာအသက် 1,000 နှစ်ရှိကြ၏။ လိင်မှုဆိုင်ရာတက်ကြွစွာပါဝင်သူများ၏အချိုးမှာအထီးဆယ်ကျော်သက်များအနက်လှိုင်း ၃ တွင်အခြေခံတွင် ၂၃% မှ ၃၈.၁% သို့လည်းကောင်း၊ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အမျိုးသမီးများအတွက်လှိုင်း ၃ တွင် - ၁၉.၇% မှ ၃၈.၁% သို့တိုးပွားလာသည်။ အလယ်အလတ်မှမြင့်မားသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံသောဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားများနှင့်ပုံမှန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုတင်ပြသောဆယ်ကျော်သက်အမျိုးသမီးများသည်လိင်မှုကိစ္စစတင်နှုန်းမြင့်မားကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ အာရုံခံစားမှု - ရှာဖွေသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားများတွင်လိင်မှုကိစ္စစတင်ခြင်းနှင့်လည်းဆက်စပ်မှုရှိသည်။
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်ကျား၊Wright & Donnerstein, 2014) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်အမျိုးသမီးများအားအလုပ်ခွင်တွင်ယောက်ျားများ (လက်အောက်ခံအမှုဆောင်၊ အမျိုးသမီးအတွင်းရေးမှူး) တွင်လက်အောက်ခံများအဖြစ်ပုံဖော်လေ့ရှိသည်။ အမြိုးသမီးမြားအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်လက်အောက်ခံခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသူတို့ကိုပျော်ရွှင်ဖို့စိတ်အားထက်သန်အများဆုံးပုံပေါ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်မိရိုးဖလာလိင်မှုကိစ္စနှင့်ဆိုင်သောလိင်မှုကိစ္စကိုဖောက်ဖျက်သည်ကိုလက်ထပ်ပြီး၊Wright & Donnerstein, 2014) ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်လိင်ကိုချစ်ခြင်း၊ ချစ်ခင်ခြင်း၊ အန္တရာယ်ရှိသောလိင်အမူအကျင့်များကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများတွင်မကြာခဏကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်း၊ မိတ်ဖက်များနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းနှင့်မကြာခဏအနည်းဆုံးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ၃ ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပုံဖော်ထားသည်။ လေ့လာရေး (Johansson & Hammarén, 2007; Lo, Neilan, Sun, & Chiang, 1999; Rothman et al ။ , 2012ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ထိတွေ့ခြင်းသည်အခြားလိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ စအိုဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ ပါးစပ်လိင်၊ အသည်းအသန်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်အန္တရာယ်ရှိသည့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကဲ့သို့သောအခြားလိင်စိတ်သဘောထားများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုမိတ်ဖက်များကဖော်ပြသည်။
Ybarra et al ။ (၂၀၁၁)ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များတွင်လိင်ဆိုင်ရာရန်လိုသည့်အပြုအမူများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုစစ်ဆေးခဲ့သည်။ အသက် ၁၀ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်ကြားကလေး ၃၀၀၀ ကျော်အား၎င်းတို့၏ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှု (လူကိုယ်တိုင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှု၊ နည်းပညာအခြေပြုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်တောင်းခံခြင်း) နှင့်လိင်ကျူးကျော်မှုကျူးလွန်ခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သည်။ လူငယ်များ၏လေးပုံတစ်ပုံ (၂၃%) သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပြီး ၅% ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်သောအပြုအမူများကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ဆယ်ကျော်သက် ၅ ရာခိုင်နှုန်းအောက်သာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြာစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ထိတွေ့ကြောင်းတင်ပြခဲ့သည် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖော်ထုတ်တင်ပြခဲ့သည့်လူငယ်များသည်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအသုံးပြုမှုကိုသတင်းပို့ခြင်းမရှိသောလူငယ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်သောအပြုအမူများကျူးလွန်မှုကို ၆.၅ ဆပိုများကြောင်းတွေ့ရှိရသည် လိင်မှုဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်ထိတွေ့မှုသတင်းပို့သည့်လူငယ်များသည် ၄ ​​င်းတို့၏ညစ်ညမ်းစာပေမဟုတ်သောကြည့်ရှုသည့်သက်တူရွယ်တူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်သောအပြုအမူများကို ၂၄ ကြိမ်ပိုမိုကျူးလွန်ရန်ရှိသည်။ ဤသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရန်လိုအပြုအမူများပါဝငျ၏ဖြစ်နိုင်ခြေတိုးလာကျား, မ - သတ်သတ်မှတ်မှတ်မဟုတ်ခဲ့, ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုကြည့်ရှုသည့်ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများသည်အထူးသဖြင့်လိင်အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရန်လိုသည့်အပြုအမူများတွင်ပါ ၀ င်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
လူကြီးများအင်တာနက် အသုံးပြု၍ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများလေ့လာခြင်းသည်အချို့သောသူများသည်၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးမှုကိုသတင်းပို့ခြင်း၊ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်နှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများစသည့်ဘဝကဏ္areasများတွင်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေသည်။Duffy, Dawson, & dasNair, 2016) ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူ ဦး ရေတွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရောဂါ (IPD) ၏အမှန်တကယ်ပျံ့နှံ့မှုမှာရောဂါရှာဖွေသတ်မှတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ သဘောတူညီချက်မရှိသောကြောင့်ခန့်မှန်းရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။Laier & အမှတ်တံဆိပ်, 2017) ။ အရေးကြီးသည်မှာ IPD သည်သေးငယ်သော်လည်းသိသာထင်ရှားသည့်လူ ဦး ရေအတွက်ပြbecomesနာဖြစ်လာသည်။Sniewski, Farvid, & Carter က, 2018) ။ ကျွမ်းကျင်သူများအကြားအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုကိုလိင်စွဲလမ်းမှုပုံစံတစ်ခုအဖြစ်မည်သို့အကောင်းဆုံးသတ်မှတ်နိုင်မည်နည်းနှင့် ပတ်သက်၍ လက်ရှိအငြင်းပွားမှုရှိသည်။Kafka, 2014) သို့မဟုတ်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုအမျိုးအစား (လူငယ်တို့, 2008) ။ မည်သို့ပင်အမျိုးအစားခွဲခြားထားပါစေအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များသည်ပြproblemနာအပြာစာပေရုပ်ပုံကြည့်ရှုခြင်းကိုတီထွင်ရန်အန္တရာယ်များလာသည်။ ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါများအဖြစ်အခြေခံ comorbidities နှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီ (Laier & အမှတ်တံဆိပ်, 2017; သစ်သား, 2011), Impulse (Grant & Chamberlain, 2015အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခြင်း (compulsivity)Wetterneck et al ။ , 2012), ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်လိုငွေပြမှု (Sirianni & Vishwanath, 2016) နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးမြင့်မားမှုအဆင့် (Kasper, က Short, & Milam, 2015) သူတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်ရန်အထူးသဖြင့်အားနည်းချက်ရှိသည်။ IPD အတွက်ကုသမှုခံယူသူအများစုသည်ကော့ကေးဆပ်လူမျိုးများဖြစ်ကြောင်းသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။Kraus, Meshberg-Cohen, Martino, Quinones, & Potenza, 2015), သူတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုသည်ကိုယ်ကျင့်တရားလွန်ကျူးခြင်းဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်သည် (Grubbs, Volk, Exline, & Pargament, 2015) နှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှစောလျင်စွာသတင်းပို့ခြင်း၊Doornwaard et al ။ , 2016). Alexandraki, Stavropoulos, Burleigh, King, & Griffiths (2018)) အသက် ၁၆ နှစ်တွင်ဆယ်ကျော်သက် ၆၄၈ ဦး ကိုလေ့လာခဲ့ပြီး ၁၈ နှစ်အရွယ်တွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ခြင်းသည်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏သိသာထင်ရှားသည့်အန္တရာယ်အချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအင်တာနက်ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဖိအားပေးခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နေ့စဉ်ဘဝကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ သက်သေအထောက်အထားများအရအလွန်အကျွံညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းက ဦး နှောက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေပြီးဆေးစွဲမှုတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းအလုပ်လုပ်သည့်မှတ်ဉာဏ်စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းခြင်းအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။Laier, Schulte, & Brand, 2013), အသုံးပြုမှုကိုအားဖြည့်ကြောင်း neuroplasticity ပြောင်းလဲမှုများကို (မတ်ေတာ, Laier, အမှတ်တံဆိပ်, Hatch, & Hajela, 2015) နှင့်မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်အတွက်လျှော့ချရေး (Kühn & Gallinat၊ ၂၀၁၄) ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုကကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျအပြာစာပေရုပ်ပုံစွဲသူများ၏ ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုပြသခဲ့သည်။Gola et al ။ , 2017).
ကလေးများနည်းပညာ၊ အထူးသဖြင့်စမတ်ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်ကွန်ပျူတာကဲ့သို့သောမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအသုံးပြုမှုသည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းသိသိသာသာတိုးပွားလာခဲ့သည်။ Kabali et al ။ (၂၀၁၅)၀ င်ငွေနည်းပါးသောဆေးခန်းမှစုဆောင်းထားသည့် ၀ မှ ၄ နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်များပါဝင်သည့်လေ့လာမှုတစ်ခုတွင်ကလေးအားလုံး၏ (၉၆.၆%) အားလုံးနီးပါးမိုဘိုင်းဖုန်းကိုအသုံးပြုကြပြီး ၇၅% သည်သူတို့၏စက်ပစ္စည်းနှင့် ၂ နှစ်အရွယ်ရှိသူများဖြစ်သည်။ ပုံမှန်မိုဘိုင်းကိရိယာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကလေးသူငယ်သူနာပြုလေ့ကျင့်သူ (PNPs) အများစုသည်အင်တာနက်နည်းပညာနှင့် ပတ်သက်၍ အကျွမ်းတဝင်ရှိပြီးခေတ်မီဆန်းပြားသောအသက်အရွယ်မရွေးကလေးသူငယ်များအားစောင့်ရှောက်မှုပေးခြင်းသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်သည်။
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအမေရိကန်ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအလွယ်တကူရရှိနိုင်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းသည်ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုလေ့လာမှုများကဖော်ပြသည်။ PNP များသည်စောင့်ရှောက်သူများနှင့်ကလေးများနှင့်အတူညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းကိစ္စကိုကိုင်တွယ်ရာတွင်သက်သောင့်သက်သာရှိပြီးဗဟုသုတရှိရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ Rothman et al ။ (၂၀၁၇)ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသည့်သူတို့၏ကလေးငယ်များ (အသက် ၁၂ နှစ်အောက်) အပေါ်မိဘ၏တုန့်ပြန်မှုကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ဤနမူနာ ၂၇၉ ပါမိဘများစွာသည်မသန်မစွမ်းဖြစ်ခြင်း၊ ကလေးအားမည်သို့တုံ့ပြန်ရမည်ကိုမသေချာခြင်းနှင့် ၄ င်းတို့ကလေးအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းများရှိသည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ကလေးအများစု (၇၆ ရာခိုင်နှုန်း) သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအွန်လိုင်း၊ ၁၃% ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူနှင့် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းသောရုပ်မြင်သံကြားစက်များကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်။ မိဘများ၏လေးပုံတစ်ပုံ (၂၄%) က ၄ င်းတို့ကလေးများ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ခြင်းသည်ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်ဟုခံစားခဲ့ရကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ မိဘများကမည်သည့်ကလေးကမျှကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကလေးအားမေးမြန်းခဲ့ခြင်းကြောင့်သူတို့၏ကလေးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားသိရှိခဲ့ရသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ မိဘများအနေဖြင့်လည်းသူတို့ကလေး၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူကိုလမ်းညွှန်ခြင်းသို့မဟုတ်လက်ကမ်းစာစောင်ပေးခြင်းသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းတို့၏ကလေးများနှင့်မည်သို့ပြောဆိုရမည်ကိုပိုမိုသိရှိရန်ကူညီရန်အခြားပညာရေးဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များသို့လမ်းညွှန်ပေးခြင်းကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။Rothman et al ။ , 2017).
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောမိဘများနှင့်သူတို့၏ကလေးများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန် PNP များသည်အဆင်သင့်ဖြစ်သင့်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်၏ပထမအဆင့်သည်ကလေးသူငယ်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအားအွန်လိုင်းနည်းပညာအသုံးပြုမှုကိုအကဲဖြတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ကလေးအထူးကုအကယ်ဒမီကကလေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများသည်ကလေးငယ်များအားလုံးလည်ပတ်ချိန်တွင်နည်းပညာနှင့်သက်ဆိုင်သည့်မေးခွန်း ၂ ခုကိုဆယ်ကျော်သက်များနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများကိုမေးမြန်းရန်အကြံပြုသည် (ဆက်သွယ်ရေးနှင့်မီဒီယာကောင်စီ, 2010): အင်တာနက်နှင့်အွန်လိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာများတွင်သင်နေ့စဉ်အချိန်မည်မျှဖြုန်းနေသနည်း။ ; မင်းရဲ့အိပ်ခန်းထဲမှာအင်တာနက်ကိုသုံးခွင့်ရှိသလား။ အမေရိကန်အကယ်ဒမီအကယ်ဒမီမှဆယ်ကျော်သက်များသည်မီဒီယာအသုံးပြုမှုကိုတစ်နေ့လျှင် ၂ နာရီအောက်သာကန့်သတ်ရန်အကြံပြုသည်။Barkin et al ။ , 2008).
PNP များကမိဘများသည်သူတို့ကလေးများနှင့်အွန်လိုင်းကြည့်နေသည့်အရာနှင့်သူတို့အွန်လိုင်းစကားပြောဆိုနေခြင်းနှင့်သူတို့ကလေးများအားသူတို့၏အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ပွင့်လင်းရိုးသားရန်အားပေးခြင်းသည်မည်မျှအရေးကြီးသည်ကိုအလေးအနက်ထားသင့်သည်။ မိဘများသည်အိမ်ကွန်ပျူတာနှင့်လက်ကိုင်ဖုန်းများတွင်လိင်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့်ထိတွေ့မှုဖြစ်နိုင်ချေကိုလျှော့ချရန်အင်တာနက်လုံခြုံရေးအစီအစဉ်ကိုရေးဆွဲရန်အရေးကြီးသည်။ စီစစ်ခြင်း၊ ပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်စောင့်ကြည့်ခြင်းဆော့ဝဲများပါ ၀ င်သောကြိုတင်ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာ software ကို install လုပ်သင့်သည်Ybarra, Finkelhor, Mitchell, & Wolak, 2009) ။ မိဘများနှင့်လူကြီးများသာဖြစ်သောအကြောင်းအရာများကိုကြည့်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်မိဘများနှင့်ဆွေးနွေးခြင်း၏အရေးကြီးပုံကိုမိဘများနှင့်ဆွေးနွေးပါ။ အထူးသဖြင့်ကလေးငယ်များအတွက်၊ အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းကိုတစ် ဦး တည်းကန့်သတ်မထားပါနှင့်။ အိမ်၏အများသုံးဒေသများတွင်သာအင်တာနက်အသုံးပြုရန်အားပေးပါ။ မိဘများကိုသတိကြီးစွာ ထား၍ အသက်ကြီးသောကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အွန်လိုင်းအပြုအမူနှင့် ပတ်သက်၍ ပွင့်လင်းမှုမရှိဘဲရိုးသားမှုရှိစေနိုင်သည်။ မိဘများအနေဖြင့်လည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်အွန်လိုင်းတွင်ကြည့်နေသည့်အရာများကိုလည်းအသိအမှတ်ပြုပြီးသူတို့ကလေးများအားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသို့မဟုတ်သူတို့ကြည့်ရှုနေသည့်အခြားအရွယ်ရောက်ပြီးသူအကြောင်းအရာများကိုကြည့်ရှုခြင်းမှကာကွယ်ပေးရမည်။
အင်တာနက်လုံခြုံရေးအစီအစဉ်သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော်လည်းအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုလုံးဝကြည့်ရှုခြင်းကိုတားဆီးရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ထိတွေ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကြိုတင်ခန့်မှန်းလမ်းညွှန်မှုပေးခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်သက်ဆိုင်သောအသက်အရွယ်အလိုက်စကားပြောရန်မိဘများကိုအားပေးပါ။ သူတို့နှင့်ရှုပ်ထွေးစေသည့်သို့မဟုတ်စိတ်ရှုပ်စေသောအွန်လိုင်းတစ်ခုခုကိုတွေ့လျှင်မိဘထံသို့လာရန်အားပေးပါ။ ၎င်းသည်၎င်းတို့သည်မတော်တဆထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာများမှမတော်တဆတွေ့မိလျှင်၎င်းတို့အားကာကွယ်ပေးလိမ့်မည်။ မိဘများအနေဖြင့်လိင်၊ လိင်နှင့်ရငျးနှီးမှုနှငျ့ ပတျသကျ၍ ကလေးများ၊ မြီးကောင်ပေါက်များနှင့်အရွယ်အလိုက်သင့်လျော်သောဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ မိဘနှင့်ကလေးအကြားဤပွင့်လင်းသောဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ခြင်းသည်ကလေးအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမေးခွန်းများသို့မဟုတ်သိလိုစိတ်များဖြင့်မိဘထံသို့လာရန်လွယ်ကူစေလိမ့်မည်။ ကြည့်ပါ ထောင့်ကွက်3မိဘများအနေဖြင့်မိဘများအနေဖြင့်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုသူတို့ကလေးများနှင့်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်အပြာစာပေရုပ်ပုံကြည့်ရှုခြင်းမှအကာအကွယ်ပေးနိုင်ရန်အွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များကိုရရှိနိုင်သည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များကိုစစ်ဆေးခြင်းသည်ကလေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၏ပုံမှန်ကဏ္ aspect ဖြစ်သင့်သည်။ အသက် ၁၂ နှစ်မပြည့်သေးသောကလေးများအတွက်ကောင်းမွန်သောကလေးစာမေးပွဲများ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သင့်သည့် anogenital စာမေးပွဲသည်စိစစ်မေးခွန်းအနည်းငယ်မေးရန်သင့်လျော်သောအခွင့်အလမ်းကိုပေးသည်။ Anogenital စာမေးပွဲများတွင်ပုဂ္ဂလိကအစိတ်အပိုင်းများ၏အယူအဆနှင့်ပုဂ္ဂလိကအစိတ်အပိုင်းများကိုတို့ထိလျှင်ကလေးကဘာလုပ်သင့်သည်နှင့်၎င်းတို့ကဲ့သို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့ဖူးပါသလားဟုမေးသင့်သည်။Hornor, 2013) ။ သူတို့အဝတ်အစားမပါတဲ့လူတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေ၊ ဗီဒီယိုတွေကိုသူတို့မြင်ဖူးလားမေးကြည့်ပါ။ အဖြေဟုတ်ကဲ့လျှင်စူးစမ်းပါ။ သူတို့ပုံများကိုမည်သည့်နေရာတွင်ကြည့်ရှုသည်၊ သူတို့အဝတ်အစားမပါသောလူများဘာလုပ်နေကြသည်၊ မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကသူတို့အားရုပ်ပုံများပြသသည်၊ သူတို့ရုပ်ပုံများကိုတစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်တစ်ကြိမ်မကကြည့်ဖူးလားမေးပါ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုရန်အသက် ၁၂ နှစ်မပြည့်သေးသောကလေးများသည်အပြုအမူအားထပ်မံလေ့လာရန်စိတ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူထံလွှဲပြောင်းရန်လိုအပ်သည်။ ဆယ်ကျော်သက် ၁၂ နှစ်နှင့်အထက်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းကိုအကဲဖြတ်သင့်သည်။ ကြည့်ရှုရန်အပြုသဘောဆောင်လျှင်, ကြည့်ရှုခြင်း၏ကြိမ်နှုန်းကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကြိုးစားပါ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်းသည်ဆယ်ကျော်သက်များအားကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သူတို့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွင်ကြည့်နေသည့်အရာသည်ပုံမှန်ဘ ၀ နှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကိုပုံဖော်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းအလေးအနက်ထားရန်အရေးကြီးသည်။ ပြproblemနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်း (ကျောင်းများ၊ လူမှုရေး၊ မိသားစုဘ ၀ အလွန်အကံျွထိခိုက်ပျက်စီးစေခြင်း) ကိုဖွင့်ဟသောဆယ်ကျော်သက်များသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအထူးကုနှင့်ပြconcernနာကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည်။ ဒေသတွင်းစိတ်ကျန်းမာရေးအရင်းအမြစ်များနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်းသည် PNP အားအသင့်တော်ဆုံးစိတ်ကျန်းမာရေးလွှဲပြောင်းမှုတွင်ကူညီလိမ့်မည်။
PSB တွင်ပါဝင်သောအသက် ၁၂ နှစ်အောက်ကလေးများအားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်ထိတွေ့မှုအတွက်အကဲဖြတ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ကလေး၏လုံခြုံမှုကိုသေချာစေရန်ကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရည်ညွှန်းသည်။ သင့်တော်သောလေ့ကျင့်သင်ကြားထားသည့်လူတစ် ဦး ၏မှုခင်းဆိုင်ရာအင်တာဗျူးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုစစ်ဆေးမှုများတွင်ကျွမ်းကျင်သောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ကဆေးစစ်ချက်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒေသခံအရင်းအမြစ်များကိုဗဟုသုတရှိရန်အရေးကြီးသည် PSB ၏နာတာရှည်မှုနှင့်ပြင်းထန်မှုအပေါ် မူတည်၍ ဤကလေးများသည်အထူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများမှလည်းအကျိုးကျေးဇူးရရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတွင်ခန္ဓာကိုယ်ပညာရေးနှင့်လုံခြုံမှုကိုပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့်စိတ်ဒဏ်ရာရရှိမှုကိုအသိပေးသည့်စောင့်ရှောက်မှု၏အစိတ်အပိုင်းများပါ ၀ င်သည်။
အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအမေရိကန်ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအလွယ်တကူရနိုင်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းကကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဆိုးကျိုးများစွာဖြစ်စေနိုင်သည်။ PNPs များသည်ကျောင်းများအားကျန်းမာသောရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေး၏အခြေခံများအပြင်အင်တာနက်စာတတ်မြောက်မှု၏အခြေခံမူများပါ ၀ င်သည့်ပြည့်စုံသောလိင်ပညာရေးအစီအစဉ်များကိုပေးရန်တိုက်တွန်းသင့်သည် (ဆက်သွယ်ရေးနှင့်မီဒီယာကောင်စီ, 2010) ။ PNP များသည်အွန်လိုင်းမီဒီယာများမှကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအပေါ်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသုတေသနပြုခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သင့်သည်။ အစိုးရစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုများတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းဖြင့် PNP များသည်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကလေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအားပိုမိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်ရန်ပိုမိုတင်းကျပ်သောအင်တာနက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် PNP များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာအကဲဖြတ်ရန်နှင့်လိုအပ်သလိုသင့်လျော်သောကြားဝင်ဖြန်ဖြေမှုများပေးရန်လေ့ကျင့်မှုအပြုအမူများကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ဘဝကိုချက်ချင်းပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းသည်ကလေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ PNP များသည်ပြcomfortableနာကိုဖြေရှင်းရာတွင်သက်သောင့်သက်သာရှိပြီးယုံကြည်မှုရှိရမည်။
ထကြွလွယ်သော, စိတ်လှုပ်ရှား - ရှာကြံကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဝိသေသလက္ခဏာများ
ဖွံ့ဖြိုးမှု၏အဆင့်မြင့် pubertal အဆင့်
ကလေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုရေးစင်တာနှင့်ပတ်သ က်၍ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များနှင့်ပတ်သ က်၍ စိုးရိမ်မှုရှိပါသလား။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအတတ်ပညာကိုလိင်ဆိုင်ရာအဖြစ်မှန်နှင့်ခွဲခြားရန်ကလေး / ဆယ်ကျော်သက်များ၏စွမ်းရည်
အပြုအမူစတင်သောအခါ ၇ နှစ်အောက်ကလေးများ
ကလေး၏အသက်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်အတွက်မျှော်လင့်ထားသည့်အရာများထက် ကျော်လွန်၍ လိင်ဆိုင်ရာအသိပညာ
ရှုပ်ထွေးသောလိင်ဆိုင်ရာလုပ်ရပ်များတွင်ပါ ၀ င်နေသောကလေးများ
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းသည် ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုကိုမူးယစ်ဆေးစွဲသူများနှင့်ဆင်တူသည်။
Alexandraki, K. , Stavropoulos, V. , Burleigh, TL, King, DL နှင့် Griffiths, MD အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းကိုဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပြုအမူစွဲ၏ဂျာနယ်. 2018; 7: 423-432
ဆက်သွယ်ရေးနှင့်မီဒီယာအပေါ်ကောင်စီ။ ကလေးအထူးကု၏အမေရိကန်အကယ်ဒမီ။ မူဝါဒကြေငြာချက် - လိင်၊ သန္ဓေတားခြင်းနှင့်မီဒီယာ။ ကလေးအထူးကု. 2010; 126: 576-582
ကလေးအထူးကု၏အမေရိကန်အကယ်ဒမီ။ (2018) ။ အမေရိကန်ကလေးအထူးကုအကယ်ဒမီမှကလေးများနှင့်မီဒီယာအကြံပေးချက်များ။ မှရယူရန် https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/news-features-and-safety-tips/Pages/Children-and-Media-Tips.aspx
eSafety ကော်မရှင်နာ၏သြစတြေးလျားအစိုးရရုံး (၂၀၁၀၉) ။ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ - မိဘများနှင့်စောင့်ရှောက်သူများအတွက်လမ်းညွှန်။ မှရယူရန် https://www.esafety.gov.au/parents/big-issues/online-pornography
Baams, L. , Overbeek, G. , Dubas, JS, Doornwaard, SM, Rommes, E. နှင့် Van Aken, MA ရူပဗေဒသဘောတရားအရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာသုံးစွဲမှုနှင့်ဒတ်ခ်ျဆယ်ကျော်သက်များတွင်ခွင့်ပြုထားသည့်လိင်သဘောထားများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုအလယ်အလတ်ကျသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း. 2015; 44: 743-754
Barkin, SL, Finch, SA, Ip, EH, Scheindlin, B. , Craig, JA နှင့် Steffes, J. မီဒီယာအသုံးပြုခြင်း၊ အချိန်ကုန်ခြင်းနှင့်သေနတ်သိုလှောင်ခြင်းဆိုင်ရာရုံးအခြေပြုအကြံပေးခြင်းသည်ထိရောက်မှုရှိပါသလား။ စပျစ်သီးပြွတ် - ကျပန်း, ထိန်းချုပ်ထားရုံးတင်စစ်ဆေးကနေရလဒ်တွေကို။ ကလေးအထူးကု. 2008; 122: e15-e25
Beyens, L. , Vandenbosch, L. နှင့် Eggermont, S. အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ထိတွေ့မှု - အပျိုဖော်ဝင်ချိန်နှင့်ပတ်သက်သောဆက်စပ်မှု၊ အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်များ၏ဂျာနယ်. 2015; 35: 1045-1068
Bleakley, အေ, Hennessy, အမ်နှင့် Fishbein, အမ် သူတို့၏မီဒီယာရွေးချယ်မှုတွင်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေခြင်းပုံစံ။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်. 2011; 48: 309-315
Bridges, AJ, Wosnitzer, R. , Scharrer, အီး, Sun, C နှင့် Liberman, R. ရောင်းအားအကောင်းဆုံးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများမှလိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူ - အကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအသစ်။ အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ. 2010; 16: 1065-1085
ဘရောင်း, JD, Halpern, မှန် CT နှင့် L'Engle, KL အစောပိုင်းရင့်ကျက်သောမိန်းကလေးများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်တူရွယ်တူအဖြစ်မီဒီယာ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနျြးမာရေး၏ဂျာနယ်. 2005; 36: 420-427
ဘရောင်း, JD နှင့် L'Engle, KL X-rated - အမေရိကန်အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောမီဒီယာနှင့်ထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်သောလိင်သဘောထားများနှင့်အပြုအမူများ။ ဆက်သွယ်ရေးသုတေသန. 2009; 36: 129-151
Chaffin, အမ်, ဘာလင်, အယ်လ်, Block, R. , ဂျွန်ဆင်, TC, Friedrich, WN, လူးဝစ်, DG, ... နှင့် Madden, C. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမူအကျင့်ဆိုင်ရာပြwithနာများရှိသောကလေးများအား ATSA အဖွဲ့၏အစီရင်ခံစာ။ ကလေးအနိုင်ကျင့်ခြင်း. 2008; 13: 199-218
Chen, အေ, Leung, အမ်, ချန်၊ စီ၊ နှင့်ယန်၊ ထိုင်ဝမ်ဆယ်ကျော်သက်များအကြားအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ထိတွေ့ခြင်း လူမှုအပြုအမူများနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး. 2013; 41: 157-164
Collins, RL, Strasburger, VC, Brown, JD, Donnerstein, E. , Lenhart, A. နှင့် Ward, LM လိင်မီဒီယာနှင့်ကလေးဘဝသုခချမ်းသာနှင့်ကျန်းမာရေး။ ကလေးအထူးကု. 2017; 140: S162-S166
Cooper, အေ လိင်နှင့်အင်တာနက် - ထောင်စုနှစ်သစ်သို့ဝင်ရောက်ခြင်း။ CyberPsychology နှင့်အပြုအမူ. 1998; 1: 187-193
Dillard, R. , Maguire-Jack, K. , Showalter, K. , Wolf, KG နှင့် Letson, MM လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်စိတ်ဒဏ်ရာလက္ခဏာများနှင့်အတူလူငယ်၏အလွဲသုံးစားမှုထုတ်ဖော်။ ကလေးသူငယ်အလွဲသုံးမှုနှင့်လျစ်လျူရှုမှု. 2019; 88: 201-211
Doornwaard, SM, van den Eijnden, RJ, Baams, L. , Vanwesenbeeck, I. , နှင့် ter Bogt, TF စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုခချမ်းသာမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ် ၀ င်စားမှုအလွန်များခြင်းတို့သည်ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအင်တာနက်ပစ္စည်းများကိုအတင်းအကြပ်အသုံးပြုခြင်းလက္ခဏာများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည်။ လူငယ်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ဂျာနယ်. 2016; 45: 73-84
Duffy, A. , Dawson, DL နှင့် Das Nair, R. အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်အပြာစာပေစွဲချက် - အဓိပ္ပာယ်နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်. 2016; 13: 760-777
ရေလွှမ်းမိုးခြင်း, အမ် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုသြစတြေးလျရှိလူငယ်များနှင့်ထိတွေ့ခြင်း။ လူမှုဗေဒ၏ဂျာနယ်. 2007; 43: 45-60
Gola, အမ်, Wordecha, အမ်, Sescousse, G. အ, Lew-Starowicz, အမ်, Kossowski, ခနှင့် Wypych, အမ် ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းဖြစ်နိုင်သလား? ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်ကုသမှုရှာကြံယောက်ျားတစ်ဦး fMRI လေ့လာမှု။ Neuropsychopharmacology. 2017; 42: 2021-2031
Gossett, JL နှင့် Byrne, အက်စ် 'ဒီမှာနှိပ်ပါ' - အင်တာနက်မုဒိမ်းမှုဆိုဒ်များတွင်အကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု။ လိင်နှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်း. 2002; 16: 689-709
Grant, ဂျေနှင့် Chamberlain, အက်စ် Impulse ကုသဘို့ Psychopharmacological ရွေးချယ်စရာ။ စိတ်ရောဂါ Times သတင်းစာ. 2015; 32: 58-61
Grubbs, JB, Volk, F. , Exline, JJ နှင့် Pargament, KI အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း - စွဲလမ်းမှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှုနှင့်တိုတောင်းသောအတိုင်းအတာကိုအတည်ပြုခြင်း။ လိင်နှင့်အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်. 2015; 41: 83-106
Hardy, SA, Steelman, MA၊ Coyne, SM နှင့် Ridge, RD ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသောဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဘာသာရေးသည် အသုံးချ Developmental စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်. 2013; 34: 131-139
Hasking, PA, Scheier, LM နှင့် Abdallah, AB မြေားသောဆယ်ကျော်သက်အပြစ်ကျူးလွန်မှု၏အတန်းသုံးမျိုးနှင့်အတန်းတစ်ခုစီတွင်ပါဝင်ရန်အန္တရာယ်အချက်များ။ ရန်လိုမူအကျင့်. 2011; 37: 19-35
Hornor, G. အ ကလေးသူငယ်မတော်မတရားပြုမူဆက်ဆံခြင်း - စစ်ဆေးခြင်းနှင့်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းလမ်းညွှန်။ ကလေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၏ဂျာနယ်. 2013; 27: 242-250
အင်တာနက် issues.org (2019) ။ ကလေးများအားအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်ကူညီခြင်း။ မှရယူရန် https://www.internetmatters.org/issues/online-pornography/protect-your-child/
Johansson, T. နှင့်Hammaré, N. Hegemonic ပုလ်နှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်လူငယ်များ၏သဘောထားနှင့်ဆက်ဆံမှု။ အမျိုးသားလေ့လာရေးဂျာနယ်. 2007; 15: 57-70
Kabali, HK, Irigoyen, MM, Nunez-Davis, R. , Budacki, JG, Mohanty, SH, Leister, KP, နှင့် Bonner, RL ကလေးငယ်များမိုဘိုင်းမီဒီယာပစ္စည်းများကိုထိတွေ့အသုံးပြုခြင်း။ ကလေးအထူးကု. 2015; 136: 1044-1050
Kafka, အမတ် hypersexual ရောဂါဘာဖြစ်သွားတာလဲ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း. 2014; 43: 1259-1261
Kasper, TE, Short, MB နှင့် Milam, AC မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှု။ လိင်နှင့်အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်. 2015; 41: 481-486
Kraus, SW, Meshberg-Cohen, အက်စ်၊ မာတီနို၊ အက်စ်၊ ကွီနုန်း၊ LJ နှင့် Potenza, MN ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကို naltrexone ဖြင့်ကုသခြင်း - ဖြစ်ရပ်မှန်အစီရင်ခံစာ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်. 2015; 172: 1260-1261
Kühn, အက်စ်နှင့် Gallinat, ဂျေ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်ဆက်သွယ်မှု - porn ပေါ်ရှိ ဦး နှောက်။ ဂျေအေအမ်အေစိတ်ရောဂါကုသမှု. 2014; 71: 827-834
Laier, C. နှင့်အမှတ်တံဆိပ်, အမ် အင်တာနက်ပေါ်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုပြီးနောက်ကြည့်ရှုခြင်းအပြောင်းအလဲသည်အင်တာနက် - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကြည့်ရှုသည့်ရောဂါနှင့်ပတ်သက်သောသဘောထားများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူအစီရင်ခံစာများ. 2017; 5: 9-13
Laier, C. , Schulte, FP နှင့် Brand, M. ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာတင်ခြင်းသည်အလုပ်လုပ်သောမှတ်ဉာဏ်စွမ်းစွမ်းအားကိုအနှောင့်အယှက်ပေးသည်။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်. 2013; 50: 642-652
Livingstone, အက်စ်နှင့်စမစ်, PK နှစ်စဉ်သုတေသနသုံးသပ်ချက် - ကလေးသူငယ်များအွန်လိုင်းနှင့်မိုဘိုင်းနည်းပညာအသုံးပြုသူများကြုံတွေ့ရသောထိခိုက်မှုများ - ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်တွင်လိင်နှင့်ရန်လိုသောအန္တရာယ်များကိုသဘာဝ၊ ပျံ့နှံ့မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု။ ကလေးစိတ်ပညာနှင့်စိတ်ရောဂါကုသမှုဂျာနယ်နှင့်မဟာမိတ်စည်းကမ်းများ. 2014; 55: 635-654
Lo, V. , Neilan, E. , Sun, M. နှင့် Chiang, S. ထိုင်ဝမ်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်လိင်ဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူများအပေါ်သက်ရောက်မှုများ။ ဆက်သွယ်ရေး၏အာရှဂျာနယ်. 1999; 9: 50-71
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ, တီ, Laier, C တို့, အမှတ်တံဆိပ်, အမ်, Hatch, အယ်လ်နှင့် Hajela, R. အင်တာနက်အပြာစာပေစွဲခြင်း၏အာရုံကြောသိပ္ပံ - ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်မွမ်းမံခြင်း။ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ. 2015; 5: 388-433
Luder, MT, Pittet, I. , Berchtold, A. , Akré, C, Michaud, PA, နှင့်Surís, JC ဆယ်ကျော်သက်များအကြားအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်အပြုအမူများအကြားဆက်နွယ်မှုများ - ဒဏ္Myာရီလောသို့မဟုတ်အဖြစ်မှန်လော။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း. 2011; 40: 1027-1035
Malamuth, N. , Linz, D. , Yao, M. နှင့် Amichai-Hamburger အင်တာနက်နှင့်ကျူးကျော်ခြင်း၊ လှုံ့ဆော်ခြင်း၊ တားမြစ်ခြင်းနှင့်အခွင့်အလမ်းရှုထောင့်များ။ လူမှုကွန်ယက်: ဆိုက်ဘာစပေ့တွင်လူ့အပြုအမူ. အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကသတင်းထုတ်, နယူးယောက်, နယူးယော့; 2005: 163-191
Matković, T. , Cohen, N. နှင့်Štulhofer, အေ လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့်၎င်း၏ဆက်နွယ်မှု။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနျြးမာရေး၏ဂျာနယ်. 2018; 62: 563-569
Mesch, GS ဆယ်ကျော်သက်များအကြားလူမှုရေးနှောင်ကြိုးနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ ဆယ်ကျော်သက်များ၏ဂျာနယ်. 2009; 32: 601-618
Mesman, GR, Harper, SL, Edge, NA, Brandt, TW နှင့် Pemberton, JL ကလေးများအတွက်ပြsexualနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ ကလေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၏ဂျာနယ်. 2019; 33: 323-331
မစ်ချယ်, KJ နှင့်ဝဲလ်၊ အမ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရလိုသူများအတွက်ပြproblemsနာများအင်တာနက်အတွေ့အကြုံများ။ လူမှုရေးသိပ္ပံနှင့်ဆေးပညာ. 2007; 65: 1136-1141
အမျိုးသားကလေးစိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုကွန်ယက် (2009) ။ ကလေးများရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုနားလည်ခြင်းနှင့်ကိုင်တွယ်ခြင်း - မိဘများနှင့်စောင့်ရှောက်သူများအတွက်အချက်အလက်များ။ မှရယူရန် https://ncsn.org/sites/default/files/resources//understanding_coping_with_sexual_behavior_problems.pdf
ပတေရုသ, ဂျေနှင့် Valkenburg, pm တွင် ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ - အနှစ် ၂၀ ကြာသုတေသနကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း လိင်သုတေသနဂျာနယ်. 2016; 53: 509-531
ကလေးသူငယ်အလွဲသုံးစားမှုအမေရိက (2019) တားဆီး။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံ၏သက်ရောက်မှုများကိုနားလည်ခြင်း။ မှရယူရန် https://preventchildabuse.org/resource/understanding-the-effects-of-pornography-on-children/
Reid Chassiakos, YL, Radesky, J. , Christakis, D. , Moreno, MA, Cross, C နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်မီဒီယာဆိုင်ရာကောင်စီ။ ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်ဒီဂျစ်တယ်မီဒီယာ။ ကလေးအထူးကု. 2016; 138: 1-16
Rothman, EF, Decker, MR, Miller, E. , ရိဒ်, အီး, Raj, အေနှင့် Silverman, JG ဆယ်ကျော်သက်အမျိုးသမီးမြို့ပြကျန်းမာရေးဆေးခန်းလူနာနမူနာများထဲမှလူပေါင်းစုံလိင်ဆက်ဆံခြင်း။ မြို့ပြကျန်းမာရေးဂျာနယ်. 2012; 89: 129-137
Rothman, EF, Paruk, ဂျေ, Espensen, အေ, ဘုရားကျောင်း, JR နှင့်အဒမ်, K. ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကြည့်သည့်အခါအမေရိကန်မိဘများပြောသောအရာနှင့်အဘယ်သို့ပြုမည်ကိုအရည်အသွေးဆိုင်ရာလေ့လာခြင်း။ ပညာရေးဆိုင်ရာကလေးအထူးကု. 2017; 17: 844-849
Ševčíková, အေ, Šerek, ဂျေ, Barbovschi, အမ်နှင့် Daneback, K. ဥရောပလူငယ်များအကြားရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနှင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနှင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိထိတွေ့မှုအတွက်တစ် ဦး ချင်းဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်လစ်ဘရယ်ဝါဒ၏အခန်းကဏ္:: တစ် ဦး က multilevel ချဉ်းကပ်မှု။ လိင်သုတေသနနှင့်လူမှုရေးပေါ်လစီ. 2014; 11: 104-115
Shek, DTL နှင့် Ma, CMS ဟောင်ကောင်ရှိတရုတ်မြီးကောင်ပေါက်များတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေပစ္စည်းများစားသုံးမှုကိုဆန်းစစ်ရန်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းပုံစံကိုအသုံးပြုခြင်း။ မသန်စွမ်းသူများနှင့်လူ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအပေါ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်. 2014; 13: 239-245
က Short, MB, Black က, အယ်လ်, စမစ်, AH, Wetterneck, မှန် CT နှင့်ဝဲလ်, DE အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ကနည်းနာများနှင့်နည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုသည်။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာ၊ အပြုအမူနှင့်လူမှုကွန်ယက်. 2012; 15: 13-23
Sirianni, JM နှင့် Vishwanath, အေ ပြProbleနာရှိသောအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု - မီဒီယာတက်ရောက်မှုရှုထောင့်။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်. 2016; 53: 21-34
Sniewski, အယ်လ်, Farvid, P. နှင့် Carter က, P. Self- ရိပ်မိပြproblemနာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုမှုနှင့်အတူအရွယ်ရောက်ပြီးသူလိင်ကွဲယောက်ျားများ၏အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကုသမှု: တစ် ဦး ကပြန်လည်သုံးသပ်။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူ. 2018; 77: 217-224
Strasburger, VC, Jordan, AB နှင့် Donnerstein, E. ကလေးများ၊ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်မီဒီယာ - ကျန်းမာရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ (VII)မြောက်အမေရိက၏ကလေးဆေးခန်း. 2012; 59: 533-587
Strouse, JS, Goodwin, MP နှင့် Roscoe, B. အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်များအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်မှုနှင့်ပတ်သက်သောသဘောထားဆက်စပ်မှု။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ. 1994; 31: 559-577
Tsaliki, L porn ဖြင့်ကစားခြင်း - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွင်ဂရိကလေးများစူးစမ်းလေ့လာခြင်း လိင်ပညာပေး. 2011; 11: 293-302
Tsitsika, အေ, Critselis, အီး, Kormas, G. အ, Konstantoulaki, အီး, Constantopoulos, အေနှင့် Kafetzis, D. ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ညစ်ညမ်းသောအင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်း - ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်သောအချက်များနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုသက်ရောက်မှုများကိုဘက်စုံကွဲပြားသောဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု။ Cyberpsychology နှင့်အပြုအမူ. 2009; 12: 545-550
Wetterneck, မှန် CT, Little က, TE, Rinehart, KL, Cervantes, ME, Hyde, အီးနှင့်ဝီလျံ, အမ် စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး - compulsive ရောဂါနှင့်အတူလက်တင်အမေရိကန်: စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအသုံးချနှင့်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများတွင်ပါဝင်။ Obsessive-Compulsive နှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါဂျာနယ်. 2012; 1: 85-97
Wingood, GM, DiClemente, RJ, Harrington, K. , Davies, S. , Hook, EW, နှင့် Oh, MK X- အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောရုပ်ရှင်နှင့်မြီးကောင်ပေါက်များ၏လိင်နှင့်သန္ဓေတားနည်းနှင့်ဆက်နွယ်သောသဘောထားများနှင့်အပြုအမူများနှင့်ထိတွေ့ခြင်း။ ကလေးအထူးကု. 2001; 8: 473-486
Wolak, ဂျေ, မစ်ချယ်, K. နှင့် Finkelhor, D. လူငယ်အင်တာနက်အသုံးပြုသူများကိုအွန်လိုင်းနမူနာတစ်ခုမှအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ထိတွေ့မှုမလိုလား။ အလိုရှိသည်။ ကလေးအထူးကု. 2007; 119: 247-257
Wood, အိပ်ချ် လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများပိုမိုဆိုးရွားလာစေရန်အင်တာနက်နှင့်၎င်း၏အခန်းကဏ္။ ။ Psychoanalytic Psychotherapy. 2011; 25: 127-142
Wright, PJ လူငယ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်သတင်းမီဒီယာအကျိုးသက်ရောက်မှုများ Causality for Claiming ကိုအကဲဖြတ်ခြင်း။ နိုင်ငံတကာဆက်သွယ်ရေးအသင်းရာဇဝင်. 2011; 35: 343-385
Wright, PJ နှင့် Donnerstein, အီး အွန်လိုင်းလိင် - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၊ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဆေးပညာ: အနုပညာပြည်နယ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း. 2014; 25: 574-589
Wright, PJ နှင့်Štulhofer, အေ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်အပြာစာပေရုပ်ပုံကြည့်ခြင်း၏ရူပဗေဒသဘောတရား။ လူ့အပြုအမူအတွက်ကွန်ပျူတာများ. 2019; 95: 37-47
Ybarra, ML, Finkelhor, D. , Mitchell, KJ နှင့် Wolak, J. အိမ်ကွန်ပျူတာတွင်ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်စစ်ထုတ်ခြင်းဆော့ဖ်ဝဲများနှင့်လူငယ်များအကြားအွန်လိုင်းမှလိင်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုမလိုလားအပ်သောထိတွေ့မှု။ ကလေးသူငယ်အလွဲသုံးမှုနှင့်လျစ်လျူရှုမှု. 2009; 33: 857-869
Ybarra, ML နှင့် Mitchell က, KJ ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအကြားအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ထိတွေ့ခြင်း - အမျိုးသားစစ်တမ်း။ Cyberpsychology နှင့်အပြုအမူ. 2005; 8: 473-486
Ybarra, ML, Mitchell က, KJ, Hamburger, အမ်, Diener-West, အမ်နှင့်အရွက်, PJ X-rated ပစ္စည်းနှင့်ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအကြားလိင်ဆိုင်ရာရန်လိုသည့်အပြုအမူများကျူးလွန်ခြင်း။ ချိတ်ဆက်မှုရှိပါသလား။ ရန်လိုမူအကျင့်. 2011; 37: 1-18
Yoder, ဂျေ, Dilliard, R. နှင့် Leibowitz, GS မိသားစုအတွေ့အကြုံများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခံရသူများ၏သမိုင်း - လူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်သောပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအကြားနှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ချက်။ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကုထုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ် Criminology အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်. 2018; 62: 2917-2936
လူငယ်တို့, KS အင်တာနက်လိင်စွဲ: အန္တရာယ်အချက်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်များနှင့်ကုသမှု။ အမေရိကန်အပြုအမူသိပ္ပံပညာရှင်. 2008; 52: 21-37
ကိုလံဘတ်စ်၊ တစ်နိုင်ငံလုံးကလေးဆေးရုံ၊ ကလေးသူငယ်သူနာပြုဆရာဝန်၊ မိသားစုဘေးကင်းရေးနှင့်ကုသမှုစင်တာ၊